Ama Ntorọbịa – hoo!haa!!
Ebe ife nine na-eme
Abakaliki – Ụkọchukwu Okochi Obeni nke Ụlọ ụka God’s Descendants Assembly, Amasiri, dị n’Okpuru Ọchịchị Ndịda Afikpo, onye ndị akpụ obi tiri gwoo gwoo ma gbakwaa ya mmiri si n’ọwa mmiri (gutter) ekwuola na ndị Dọkịnta na-ekwu na o nwere ike ịdazị ngwụrọ, ma a kpaghịrị anya. Obeni, onye bụkwaRead More →
Pakistan – Ótù onye n’ime mmadụ abụọ lanarịrịnụ na mberede ụgbọelu mere na Karachi, mba Pakistan ụbọchị Fraịdee ekwuola na ya mapụturu n’ime ụgbọelu ahụ ka ọ na-agba ọkụ. Mohammed Zubair, onye dị afọ iri abụọ n’anọ kọwara ihe mere. “Ka ụgbọelu kụrụ, e nwetere m onwe m were hụRead More →
Enugwu – Òtù Association of South East Town Unions(ASETU) agwala ndị Fulanis ndị nchị ehi nile bigasị n’ime ọhịa n’Ala-Igbo ka ha kwapụ ozigbo. Òtù a kwuru na nkea bụ maka na ọ hịara ahụ ileru ndị bi n’ime ọhịa anya iji hụ na ha adaghị iwu. N’ihi nkea, ASETURead More →
TỤFỊAKWA! GỌỌMENTI ỊKỌ AKỤKỌ INYE ỤMỤ AKWỤKWỌ NRI N’OGE MKPỌCHI OBODO ỌRỊA KORO BỤ OHI- NANS
Anyị amalite ngagharị iwe kpụ ọkụ n’ọnụ Abiokuta – Otu National Association of Nigerian Students (NANS) akatọọla atụmatụ Gọọmenti Etiti Naịjiriya nwere nke ha ji akọ akụkọ ịmalitekwa inye ụmụ akwụkwọ nri n’oge Mkpọchi Obodo ọrịa koro dịka ohi nakwa iri ngarị. N’okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ụbọchị Fraịdee,Read More →
A TỌHAPỤLA STRIKER, NNAMDI OBI, NWA IPOB NỌ NGA KEMGBE ỌNWA ISII
Ụmụahịa – Ụlọikpe nọ n’Ụzọakọlị, Abia Steeti nọrọ ụbọchị Tọọzdee were tọhapụ Striker, Nnamdi Obi, onye nọ n’ụlọ nga kemgbe ọnwa isii. Ndị Uwe Ojii jidere ya na ndị otu ya mmadụ abụọ ndị ọzọ n’abalị asatọ nke ọnwa Disemba, afọ 2019 n’ụzọ MCC, n’aha, Abia Steeti maka ịbụRead More →
Abakaliki – Gọvanọ Devid Ụmahị nke Ebọnyi Steeti nọrọ ụnyahụ were kwuo na ya ogbo ya nke Enugwu Steeti, Ifeanyị Ugwuanyi, ekpebiela ịrụ ọnụ ụzọ ámá n’okeala ha iji hụ -na ndị njem anaghị agafe maka mgbochi ọrịa koro. Ụmahị kwupụtara nkea n’okwu ọ gwara ndị Steeti ahụ nile banyereRead More →
ỌRỊA KORO EGBUOLA NWANYỊ AMERỊKA BỊARA ỊHỤ IKO YA NA WỌRỊ
Wọrị – Nwanyị onye ọcha, onye Amerịka dị iri afọ isii n’asaa bịara ịhụ iko ya onye nwa Naịjiriya anwụọla n’Ọrịa Koro ụbọchị ụka n’ụlọ ọgwụ na Delta Steeti. Ozi hoo!haa!! nwetara gosiri na nwanyị ahụ na iko ya nọ n’ụlọ nkwari akụ n’Osubi, Orerokpe dị n’Okpuru Ọchịchị Okpe kemgbeRead More →
OPC AGỤNYELA NDỊ ỌRỊA KORO SI KWARA NA KOGI NA NDỊ GA-EKETA N3M MAKA NRI
Legọs – Otu Oodua Peoples Congress(OPC) nọrọ ụbọchị Wenezdee na Legọs were nye Nde Naira atọ ka ndị ọrịa koro na Steeti isii nke Mpaghara Ọdịda Anyanwụ tinyere Kwara na Kogi wee zụrụ nri na ihe ndị ọzọ. Aare Onakakanfo nke Ala Yoroba, Iba Gani Abiodun Ige Adams, onye bụkwaRead More →
ATỤỌLA NWOKE OJE NGA GBAPỤRỤ N’ỤLỌ ỌGWỤ NGA ỌNWA IRI ATỌ
Osogbo – Ótú nwoke jebuworo nga, Lekan Usman, e jidere maka ịga ohi ka ụlọikpe Majie nọ n’ Osogbo nọ ụbọchị Mọnde tụọ nga ọnwa, iri atọ. E jidere nwoke a ụbọchị Fraịdee, abalị mbụ nke ọnwa Mee, n’elekere atọ nke isi ụtụtụ n’akụkụ Oke Ayepe, Osogbo ka ọ banyereRead More →
A SỤGBURU M NNE DI MAKA NA Ọ SỊ DI M GBAA M ALỤKWAGHỊM
Mịna – Ndị Uwe Ojii na Gobirawa dị n’Okpuru Ọchịchị Mashegu, Naịja Steeti ejidela Fatima Sani, onye ji mma sụgbuo nne di ya. Nwanyị ahụ na di ya, Sani Umaru, nwere esemokwu n’abalị iri abụọ n’atọ nke ọnwa Eprel afọ 2020, nke buteziri ịgba alụkwaghịm. Nwanyị ahụ dị iri afọRead More →
OSIKAPA ABỊA KACHA MMA, NKE GỌỌMENTI ETITI DỊKWA MMA ORIRI
Ụmụahịa – Gọọmenti Abịa Steeti ekwuola na akpa osikapa 1,800 ọ natara n’aka Gọọmenti Etiti bụ nke e nyochara ma chọpụta na ha dị mma oriri. Kaosiladi, Gọọmenti steeti ahụ kwuru na n’agbanyeghị nke ahụ, na e jighị osikapa ahụ atụnyere Osikapa Abịa, nke bụ ọkacha mma. Ozi nke ỌkaiwuRead More →
ZAMFARA: E JIDELA NDỊ CHAỊNA NA-EGWUPỤTA ỌLAEDO NA NZUZO
Guzo – Kọmishọna ndị Uwe Ojii na Zamfara Steeti, Usman Nagogo nọrọ ụbọchị ụka, abalị iri abụọ n’isii nke ọnwa Eprel afọ 2020, were duru ndị otu ya were wakpo ma nwuchikọkwaa ndị Chaịna mmadụ abụọ nakwa ndị otu ha ndị mba Bokina Faso. E jidere ndị ahụ aha haRead More →